Maxaa ka soo baxay shirkii madaxda Soomaaliya & Somaliland ee Jabuuti? +(War-murtiyeed) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka soo baxay shirkii madaxda Soomaaliya & Somaliland ee Jabuuti? +(War-murtiyeed)
Maxaa ka soo baxay shirkii madaxda Soomaaliya & Somaliland ee Jabuuti? +(War-murtiyeed)
Jabuuti (Halqaran.com) – Magaalada Jabuuti ee caasimadda Jabuuti waxaa maanta lagu soo gaba-gabeeyay shir maanta ku dhex maray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jamhuuriyadda goonni isutaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland.
War-murtiyeed laga soo saaray shirkaasi ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyay in la sameeyo guddi farsamo oo wada jir ah, kuwaas oo hawsha halkaa ka sii wadi doona isla markaana dib u eegi doona waxyaabaha horey loogu heshiiyay, in labada dhinac aanay siyaasadeyn kaalmooyinka horumarineed iyo maalgashiga iyo in dalka Jabuuti uu noqdo madasha kulammada dhanka farsamada ee lagu sii dhaqaajinayo wada-hadallada.
Hasayeeshee Agaasimaha Warfaafinta ee Madaxtooyada Soomaaliya, Cabdinuur Maxamed Axmed, oo farriin soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayaa sheegay in war-mutiyeedka lagu faafiyay baraha bulshada uusan ahayn midkii rasmi-ga ahaa.
Furitaankii kulankaasi waxaa khudbado ka jeediyay madaxda loo garqaadayo ee dhinaca Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaayo iyo dhinaca uu horkacayo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Madaxaweynaha Somaliland oo madasha ka jeediyay khudbad kooban ayaa carrabka ku adkeeyay halka ay markii horaba ka halowday arrinta Soomaaliya iyo Somaliland, wuxuu sheegay in dib u billaabidda wada-xaajoodyadan oo taageero ka helayo beesha caalamka ay yihiin kuwo aad muhiim ugu ah sidii loo abuuri lahaa xiriir nabdoon oo caga buuxa ku taagan oo u dhaxeeya shacabka Somaliland iyo Soomaaliya.
“Jamhuuriyadda Somaliland, waxay xorriyaddeeda ka heshay dowladda boqortooyada Ingiriiska 26-kii Juun saandkii 1960. Xorriyaddaasi ayaa laga diiwaangeliyay Qaramada Midoobey, waxana Somaliland aqoonsaday 35 waddan. Somaliland ayaa si iskeed ah Soomaaliya ula midowday 1-dii Luuliyo 1960, si loo yagleeyo Jamhuuriyaddii Soommaaliya. Midowgaasi ma ahan mid sharciyan wax ku ool ah maadaama heshiiskaasi midnimada aan si rasmi ah loo wada saxiixin. Sidaa awgeed, dedaalladaasi midnimada ayaa ka hooseeyay heerka caalamiga ah iyo kan maxalliga ahba,” ayuu yiri Muuse Biixi.
Waxa uu sheegay in 30-kii sano ee la soo dhaafay, Soomaaliya ay dagaal joogta ah kula jirtay horumarka Somaliland, dhaqaale ahaan, amni ahaan iyo maalgashiba, arrintaa oo uu sheegay in ay sii fogeysay kala shakiga iyo cadaawadda u dhaxeysay labada dhinac.
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa dhankiisa sheegay inay ka go’an tahay sii wadista wadahallada iyo isu soo dhaweynta labada dhinac. “Aniga iyo walaalkey Muuse Biixi waxaan halkan u joognaa in aan gaarno go’aanno adag si dadkayaga ay u helaan mustaqbal wanaagsan.” ayuu yiri Farmaajo.
Dhanka kale, waxaa kulanka goobjoog ka ahaa madaxweynaha martida loo yahay ee Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ra’iisuul Wasaaraha Itoobbiya Abiy Ahmed.
Abiy oo sanadkii la soo dhaafay ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel ayaa sheegay in waxa maanta shirka wada fadhiya ay yihiin dad isku qoys ah oo haddana deris wada ah.
“Kani waa shir ay isugu yimaadeen xubno ka wada tirsan hal qoys. Waligey waxaan sheegayay in waddamadeenu ay isku xirto hal xuddun. Waxaanu nahay walaalo wada dhashay, waana ku khasbannahay in aan taa ku faanno. Walaalayaal, geeska Afrika waxa uu soo maray muddo dheer oo ay ka jirtay dowlad xumo iyo hoggaan guuldareystay. Waxaan la qabsannay burburka, qaraxyada iyo muddo tobaneeyo sano ah oo dhaqaale xumo ah, kuwaa oo ka dhashay colaad caqli xumo ah. Waa in aan arrintaasi wax ka badalnaa oo aan billownaa bog cusub,” ayuu yiri Abiy Axmed.
Waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay dhibaato badan soo mareen balse ay yihiin dad gagsi badan isla markaana maskax furan oo ganacsiga aad ugu xeel dheer, waxa uuna intaasi ku daray in shacabka Soomaaliyeed ay haatan sugayaan.
Warmurtiyeedka Shirka Jabuuti